Ogaden News Agency (ONA) – Ururka Haweenka Ogadenya faraca Norway iyo Jaaliyadda Norway oo Arima Muhiim u ah ka Shiray
Ururka Haweenka Ogadenya faraca Norway iyo Jaaliyadda Norway oo Arima Muhiim u ah ka Shiray
Ururka Haweenka Ogaadeenya ee Norway oo fulinaya barnaamijkii shirweynaha haweenka ee Denmarka ayaa shir bileed ku kulmay. Shirka ayay haweenka jaaliyadda waxay ku falanqeeyeen doorka ay Ka qaadan karaan Horumarinta & isku xidhka haweenka Ogaadeenya ee caalamka ku firirsan, qorshe sanadeedka haweenka Ogaden ee Norway iyo dhameystirka dhismaha ururka.
Gudoomiyaha Ururka Haweenka ee Norway marwo Dhool Cabdiraxmaan Khaliif ayaa haweenka ku boorisay in ay dardargelin ku sameeyaan hawlaha jaaliyada si dhibka iyo tacadiga Dadka reer Ogaadeenya ay qabaan dhakhso loo Soo afjaro.
Waxaa sidoo kale shalay kulankoodii bilaha ahaa isugu yimid jaaliyada soomaalida ogaadeenya ee Norway. Kulankan oo jaaliyada bishiiba mar ay isugu timaado ayaa looga hadlaa xaalada guud ee bulshada ogaadeenya ee Norway ay ku sugantahay.
Shirka ayaa waxaa lagu furay aayadaha quraanka kariimka ah & wacdi uu Soo jeediyay sheekh Cabdi naasir. Waxaa kale oo warbixin dal & dibad kasoo jeediyay gudoomiyaha jaaliyada ogaadeenya ee norway Mudane Khaliif Cabdi Cali oo xubnaha ku booriyay in loo midoobo sare uqaadida hawlaha jaaliyada.
Waxay xubnaha Jaaliyada ku ansixiyeen barnaamij sanadeedka jaaliyada ee 2015 taas oo falanqayn kadin si wadajir ah loo ansixiyay. Shir bileedka jaaliyada ayaa wuxuu kusoo dhamaaday jawi aad u wanaagsan oo xubnahana Ka raali ahaadeen.